Semalt: Kubatsira Uye Kukanganiswa Kwekushandisa Black Hat SEO Mazano
Kuramba uchienda mberi kune vakwikwidzi vachishandisa maitiro matsva eSeO anokwanisa. Vatengesi veIndaneti vanogona kushandisa chikwata chemahombe SEO maitiro kuti vawedzere kuwedzera, kuwedzera kukurukurirana uye, kutema mamwe magwara pasina kuputsa mitemo yeGoogle. Saka, chii chitubu chetsva SEO? Izwi rokuti 'black hat' rinoreva utsinye hweSOO tactics dzinoputsa injini yekutsvaga (somuenzaniso, Google) maitiro akanaka uye mirayiridzo - grain bin sale iowa. Izvo zvinonyanya kuzivikanwa zvehutsotsi hwekutsvaga SEO ndiyo inonyanya kuisa pfungwa pakushandisa rankings uye kutsvaga injini uye kusaremekedza vashandisi.
Mutsvuku wehangu SEO inoshandisa nzira dzakadai se keyword stuffing, zvinyorwa automation uye nenyaya yekunyorera kuti iise pasi yehutano hwehutano uye kushandisa zvikwereti mumajini ekutsvaga. Uyezve, chikwata chine tsvina SEO inoshandisa tiered chivakwa chekubatanidza , gadzirai mavhiri engoro, mapeji emasuo, uye mashizha evhaak. Google, pakupedzisira yakabatwa uye yakabata maitiro matsvuku ekudhinda zvinyorwa zveGoogle Panda (inonzi algorithm) inozivikanwawo seGoogle Penguin. Kubva panguva iyo, chero nzvimbo yepaiti inoshandisa maitiro emagetsi madema inorambidzwa neGoogle. Panyaya iyi, nzvimbo yebasa iripo inogona kukwidziridzwa nekubatanidza hutsva hwemao SEO maitiro ekubatanidza mishandirapamwe yekuvaka asi mune chichena chekufamba. Igor Gamanenko, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, anokupa kuti utarise mazano mafuti anotevera:
Tactic imwe: Link Wheels
Sunga mavhiri akawana ruzivo sechikwata chekuvaka chikwata makore mashomanana adarika..Uyezve, panguva iyi, vamwe vanyoro vanozvidzivirira vatsva veSOO vanyori vakarumbidza simba rekubatanidza mavhiri kuti ave nehuwandu hwewebsite paGoogle. Zvisungo zvidema zvinoshandiswa zvakanamatira mavhiri ekusimbisa simba rezvinyorwa zvakagadzirwa, nemigumisiro yekufambisa mapeji ewebhu achikwira mumitsva yekutsvaga injini. Pfungwa yekushamwaridzana mavhiri ndeye nyore - kuvaka chimiro chemawebsite anonamatira kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe kusanganisira peji rekuvandudza. Peji yewebhu yega yega iri mumhepo uye inosimudza zvakatevera zvinotaurwa. Zvisungo zvemasvondo zvinoumba chivharo chakavharwa. Nokudaro simba rekubatanidza rinoramba richinyanya kukura pakupedzisira kutungamira ukama hwakasimba kune webhusaiti yepamusoro.
Mazano maviri: Blended Link Building
I-blended link yekuvaka ndiyo nzira inodzokorora pfungwa yekuva nehuwandu hwekuvandudza kushandiswa kwewebsite. Icho chinonyanya kukanganisa chegadziriro iyi ndechokuisa rekutsvaga mune webhusaiti pakati pemamwe mapeji ewebhu kune zvinyorwa zvine simba zvakadai seNew York Times. Nenzira iyi, muridzi wepaiti anogona kukanganisa injini yekutsvaga kubata mawebsite avo nenzira yakafanana nedzimwe mawebsite, saka kupa zvikwata zvakakwirira.
Mazano matatu: Tiered Link-Building
Nzira yacho inoshandisa pfungwa yekubatanidza mamwe mapepa ane simba seaseriki, sangano rekubatanidzwa. Zvisinei, iyo nzira iri nyore pane kuti muridzi wepaiti anogona kuvaka mashizha kune mapeji ewebhu aripo kuti avandudze nzvimbo dzavo uye chiremera. Iko tsvuku nyeredzi SEOs inoita zvikamu zvekubatanidza neinongedzo dzose dzinodzokera shure kune imwe yapfuura, pakupedzisira kusimbisa backlink.
Mazano mana: Kukurukurirana Kugadzira
Hatsiti dzvuku dzingashandisa zvidzidzo zvakadai seScrapebox kuti iongorore internet kuti ichitsvaga chero chinhu chinobva kune zvinyorwa ku keywords nemashoko ekutumira webmaster. Mashoko aya anoshandiswa mukuendesa zvikumbiro zvekushandiswa kwekutsvaga uye kuvaka kuvhiringidzwa kwepunyu kwezvakagadzirwa. Nokudaro, nekushandisa zvishandiso zvokushandisa, vashandisi vanogona kuongorora nzvimbo yekutengesa SEO zvinetso.
Kune zvakawanda zvakaoma zvakabatanidzwa mukugadzirwa kwekubatana kwechikwata. Izvi zvinosanganisira matanho ekutevera mukuwedzera chikwata chekubatanidza. Kuti ugare mberi kwemakwikwi, mutengesi wekutsvaga muIndaneti anofanira kushandisa shangu yakasviba SEO asi mumucheka mutsvuku.